သင်ခန်းစာ: Duokan ကိုသင်၏ Kindle စက်၌ထည့်ပါ eReaders အားလုံး
သင်ခန်းစာ: Duokan ကိုသင်၏ Kindle Device တွင်တပ်ဆင်ပါ
Villamandos | | ပြုပြင်မွမ်းမံ, Kindle လဲ tutorial များ
သော်လည်း Duokan အမေဇုန်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုသုံးစွဲသူများအားလုံးကလူသိများသည် တရားဝင်တစ်ခုမှအစွမ်းထက်အခြားရွေးချယ်စရာ operating system ကို တရုတ် developer တွေဖန်တီးထားတဲ့ Kindle ထုတ်ကုန်တွေမှာရှာတွေ့နိုင်တာ။
ကန ဦး ရည်ရွယ်ချက်မှာစက်ထဲတွင်တရုတ်အက္ခရာများကိုပိုမိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယနေ့တွင်၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောနောက်လိုက်များအမြောက်အမြားရရှိသောစွမ်းအားရှိသောလည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်လာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle သို့ယူဆောင်လာနိုင်သောအင်္ဂါရပ်များ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Amazon စက်ထဲသို့ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ Duokan အကြောင်းကျွန်ုပ်သိသင့်သိထိုက်သောအရာများမရှိပါ။
တရားဝင်စနစ်ကိုအစားထိုးမထားဘူး, ဒါ့အပြင် device ကို jailbreaking မလိုအပ်ပါ
ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့သူ့မှာ dual charger ရှိပြီးသင် boot လုပ်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် Duokan (Q ကိုနှိပ်ပါ) သို့မဟုတ်မှတရားဝင် operating system ကို boot Kindle (W ကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းခြင်း)
ကျွန်ုပ် Kindle တွင် Duokan ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
Duokan မူကွဲကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ် operating system ၏တရားဝင်စာမျက်နှာ
download လုပ်ထားသောဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ unzip လုပ်သည်
Kindle ကို USB နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်တွဲများကိုကူးယူကြရမည် SK_Documents, DK_Pictures နှင့် DK_System Kindle ရဲ့ root folder ထဲမှာရှိတယ်
升级 folder ဖိုင်တွဲမှကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle version နှင့်သက်ဆိုင်သော .bin ဖိုင်ကိုအမြစ်ထဲတွင်ကူးယူရပါမည်။ သင်၏ Kindle ဗားရှင်းကိုသေချာစွာစစ်ဆေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်သင်မသေချာပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။
B001 Kindle ၄
B002 Kindle2(ယူအက်စ်အေ)
B003 Kindle2(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ)
B008 Kindle3(ဝိုင်ဖိုင်)
B006 Kindle33G + WIFI (ယူအက်စ်အေ)
B00A Kindle33G + WIFI (ဥရောပ)
B004 Kindle DX (ယူအက်စ်အေ)
B005 Kindle DX (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ)
သင်၏ Kindle ဗားရှင်းကိုသင်မသေချာလျှင်၊ Serial နံပါတ်အခန်းရှိ၊ Menu / Settings နှင့်အောက်ခြေနားရှိကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့် serial-code ၏ပထမအပိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဗားရှင်းကိုသိရန်ရည်ညွှန်းချက်ပေးလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့သံသယမဆိုနေရာမရှိဘဲရှိသည်။
မိတ္တူကူးယူပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle ကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောလမ်းဖြင့်ဖြုတ်လိုက်သည်
တရားဝင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ထောက်ခံချက်အဖြစ်ကသတ်မှတ်ထားသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၅၀% ထက်ပိုသောဘက္ထရီရှိမှသာ Duokan တပ်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ သင့်တွင်အနည်းဆုံးဘက်ထရီ၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးမရှိလျှင်သင်ဤလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်
ယခုကျွန်ုပ်တို့ Menu / Settings / Menu / သင်၏ Kindle ကို Update လုပ်ပါ။ အကယ်၍ ဤနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည်မီးခိုးရောင်အရောင်ဖြင့်ပေါ်လာပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်အမှားတစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုလိုသည်
ကျွန်ုပ်တို့အဆင့်အားလုံးကိုမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်ပြီးပါက Duokan operating system မှတဆင့်သို့မဟုတ်တရားဝင် Amazon operating system မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle ကိုစတင်ရန်ခွင့်ပြုမည့် dual charger ကိုမပြသမှီတိုင်အောင် system သည်အကြိမ်ကြိမ် update လုပ်၍ ပြန်လည်စတင်မည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Kindle Direct Publishing: စာရေးသူများအတွက်ကိရိယာတစ်ခု
ရင်းမြစ် - en.duokan.com
ဒေါင်းလုပ် - Duokan
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » ပြုပြင်မွမ်းမံ » သင်ခန်းစာ: Duokan ကိုသင်၏ Kindle Device တွင်တပ်ဆင်ပါ
Rafa က de Matos ဟုသူကပြောသည်
Kindle4အတွက်မမှန်ပါ။ ရေတွင်းတစ်တွင်း TT ၌ငါ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်း
Rafa de Matos သို့ပြန်သွားပါ
ငါသည် Kindle4ရှိသူအားလုံးအတွက်စာမူတစ်ခုပြင်ဆင်နေပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့နှင့်မနက်ခင်းကြားတွင်ကျွန်ုပ်တင်မည်🙂
kindle4ထိတွေ့ ဟုသူကပြောသည်
ဒီ duokan နဲ့ငါတို့ pdfs တွေကိုကြင်ကြင်နာနာနဲ့ဖတ်နိုင်တာကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးကတရုတ်လိုဖြစ်နေပြီးမျက်စိကန်းစွာ install လုပ်ဖို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကိုရှင်ဘုရင်ဘထွေးလိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
k4 t ဟုသူကပြောသည်
k4 t ကိုစာပို့ပါ
ကောင်းပြီ၊ အဲဒီမှာမရှိဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဒီနေ့သင်တင်ပို့လိုက်တဲ့ Kindle4ကို jailbreak လုပ်ဖို့သင်ခန်းစာတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုတာနားလည်ခဲ့လို့ပါပဲ။
စိတ်မပူပါနဲ့၊ နက်ဖြန်နေ့၌ကတိတော်ကိုစောင့်ရှောက်။ သင်၏ Kindle4တွင် Duokan ကိုထည့်သွင်းပါ။
Duokan ကိုသင်၏ Kindle Touch တွင်တပ်ဆင်ရန်သင်ခန်းစာပို့ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုကူညီသည်၊ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ သင့်ကိုယုံကြည်စေသည်။ မည်သည့်မေးခွန်းများမဆိုကျွန်ုပ်အားမည်သည့်အရာဖြစ်မည်ကိုမေးမြန်းပါ။
Pau အက်ဖ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ သင်ထည့်လိုက်သော link သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်သော်လည်းဒေါင်းလုပ်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Google Translate တွင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည့်နောက်ဆုံး update ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ http://home.duokan.com
Pau F ကိုစာပြန်ပါ
ပျက်သွားတယ် ... အရမ်းဆိုးတယ် !!
သငျသညျတဖနျကြိုးစားခဲ့ဖူး ??, ကပြproblemsနာမရှိဘဲငါ့ကို downloads ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ငါ့မှာ Kindle3Wifi (B008) ရှိတယ်။
Mmmmm ဆိုသည်မှာ Kindle တစ်ခုချင်းစီတွင် Duokan ၏ကိုယ်ပိုင်တပ်ဆင်မှုရှိသည်။ သို့သော်ဤသင်ခန်းစာသည်အချိန်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအနေနှင့် Universal ဟုဆိုရလောက်အောင်တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။ မနက်ဖြန်နဲ့နောက်တစ်ရက်အကြားမှာ Kindle3အတွက်သင်ခန်းစာပို့မယ်။
ငါ "နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ" link ကိုနားမလည်ကြဘူး။ KDP အကြောင်းပြောဆိုပါ။ Duokan နဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်လဲ။
ဤကိစ္စတွင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်စပ်သောအရာများဖြစ်ရန်ကြိုးစားသည်။ သို့သော်ထိုအချက်အလက်များပိုမိုတွင်အချို့သောဘလော့ဂ်များမှသင်နှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်မှုမရှိသောဆောင်းပါးများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်ပထမဆုံးရေးသားထားသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်ကိုယ်တိုင်မှချိတ်ဆက်ရန်လင့်များမရှိပါ။
Pepe တက္ကဆက် ဟုသူကပြောသည်
ငါထင်တယ် link ကကျသွားပြီ၊ ငါမှာ K4 ရှိတယ်၊ duokan system ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ဘူး။
Pepe Tejas အားပြန်ပြောပါ
၎င်းသည် ၇ မျိုးဆက် kindle touch အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ယခု Amzon ကိုရောင်းလိုက်သည်။
Sony PRS-T2 နှင့် Kindle Paperwhite - တိုက်လေယာဉ်များ၏ပြိုင်ပွဲလား။
Caliber မှကျေးဇူးတင်စကားကိုသင်၏ eReader တွင်နေ့စဉ်ဖတ်ပါ